Dowladd Somalia oo ku adkaysatay goaanka Baarlamaanka | Berberanews.com
Home WARARKA Dowladd Somalia oo ku adkaysatay goaanka Baarlamaanka
Dowladd Somalia oo ku adkaysatay goaanka Baarlamaanka
Muqdisho-(Berberanews)-Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaan waxba iska badalin go’aankii uu dhawaan Baarlamaanku ka soo saaray muranka doorashooyinka ee ka cadhaysiiyay beesha caalamka.
Wasiirka Wasaarradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegay in waxba iska badalin sida uu hadalka u dhigay go’aankii Baarlamaanka uu dhawaan qaatay, kaddib booqashadii madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kinshaasa.
“Waxba iskama aanay badelin go’aankii baarlamaanka uu qaatay, taas waa howl baarlamaanka u taal,” ayuu yidhi
Wasiirku wuxuu intaa ku daray: “Doorashadu noocwalba oo ay ahaato, mid toos ah, mid dadban, doorasho marwalba waa inay noqotaa mid nabad ah, mid loo dhan yahay, mid waadax ah loo wada jeedo, si natiijada ka soo baxdaa ay u ahaato mid dadka oo dhan ay ku qanci karaan.”
mucaaradka ayaa siweyn uga soo horjeestay go’aankii uu dhawaan qaatay Baarlamaanka Federaalka ee muddo kordhinta labada sano ah loogu sameeyay dowladda hadda jirta.
Previous articleIdriss Deby: Siduu jiidda hore ee dagaalka ugu dhintay madaxweynihii dalka Chad?
Next articleKULMIYE Casho-sharaf ku maamuusay Murashaxiinta saddexda Gobol ee Galbeed iyo degmooyinka (A)